MITIROON BLACK: ISTICMAALKA, GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGGA - DHIRTA DAWOOYINKA
Baradhada, yaanyada, iyo eggplants, oo noo yaqaanno nolol maalmeedka, ayaa ka mid ah sagaal boqol oo nooc oo ka mid ah qoysaska dhirta sanadlaha ah, oo loo yaqanno beertii. Wakiil caan ah oo ka mid ah kooxdani waa timo madow, oo faa'iido u leh daaweynta bogsashooyinka muddo dheer, tan iyo wakhtigii Hippocrates, iyo waxyeelada suurtagalka ah ee aan la ilaawin dhakhaatiirta. Marka loo eego kala soocid aan caqli-gal ahayn, dhadhan caadi ah oo si joogta ah u koraya meel walba, nafaqada madow waxay leedahay dabeecadda oo leh habab fiican oo bogsiin ah oo ay tahay in si xirfad leh loo isticmaalo danaha dadka.
Habeenkii madow: halbeegyada kiimikada
Cunsurka noocan ah ee suuska cayayaanka dhirta waxaa lagu sababaa qaab dhismeedkeeda, oo ay ku jiraan, marka laga reebo midabada iyo maadadaha, sonkoraha organic iyo acids, iyo sidoo kale carotene. Haddii ay ka kooban tahay qaabka habeenkii madoobaaday, waxay ku koobnayd uun maaddooyinkaas, kadibna waxaa loo arki karaa oo kaliya sida daawooyinka farmaajo ama daaweyn dad, laakiin sidoo kale alaab culus. Laakiin joogitaanka glycoalkaloids iyo glycoside qadhaadh ee Dulcarmarin waxaa ku jira, taas oo ah, sunta adag dabiiciga ah, wuxuu ka dhigayaa lagama maarmaan in lagu daaweeyo habeenka madow ee leh qabashada qaar.
Ma taqaanaa? Si buuxda u dillaacsan miro duban, oo xoojiya nidaamka difaaca jirka, waa la cuni karaa xitaa carruurta 3 sano jirka ah, qaabka macaanka ama qayb ka mid ah dubista.
Wanaajinta guryaha suufka
Xilliga diiqada, saameynta macaan ee timaha madow ee nidaamka dareenka ayaa noqday mid caan ah. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa awoodda ay ku xakameyso xanuunka, saameynta choleretic iyo saameynta expectorant, guryaha kulaylka yar, si wax ku ool ah ula dagaallama geedi socodka bararka iyo rheumatiska. Maqaarka, kaadiheysta iyo mareenka kaadiheysta waxaa lagu keydiyaa timo madow oo ka yimaada cudurrada gaarka ah, sidoo kale waxay faa'iido u leedahay dadka qaba cudurada atherosclerosis iyo hypertension.
Ma taqaanaa? Waqtiga fog ee Ruushka, habeenkii ayaa la isticmaalay si loo hagaajiyo qummanaanta muuqaalka.
Isticmaalka habeenkii madow: cuntada laga helo daawada dhaqanka
Dhammaan sifooyinka tayada leh ee timaha madow leh, waxay ka dhigtay isticmaalka dawayaasha dadweynaha si fudud. Waxaa loo isticmaalaa kakan, iyo marka la eego cudurrada gaarka ah.
Iskudhin leh dhuun xanuun
Ma aha oo keliya marka uu dhuunta cuno, laakiin sidoo kale gawracatada, carruurta waxaa lagu caawiyaa qashinka leh cabitaanka madow, oo hore loogu qasi jiray biyo la qaboojiyey.
In hal litir oo dareere ah - saddex qaado oo casiir ah.
Sanka oo si dhakhso ah u dhaqsiyo ayaa noqon doona mid dhakhso badan haddii aad codsigaan u dirto soodhaan kasta oo sanka ah 2-3 dhibcood oo caleemo solanaceae ah.
Geedka xashiishka madow (5-10 g), ayaa lagu dhajiyey nus saac oo ah weel nus litir ah oo biyo karkaraya leh, daaweyn dhamaystiran oo qufac leh. Dhoofin kulul ayaa la qaadaa saddex jeer maalintii saddex meelood oo ah hal galaas, haddii loo baahdo, adoo ku daraya malab.
Ciladaha boogaha leh (iyo sidoo kale maqnaashaha, si ay u badan tahay inay u bislaadaan) ayaa lagu daaweeyaa iyadoo la adeegsanayo, caleemaha qallalan iyo kuwa cusub, labadaba caleemo qoyan. Guntada mindhicirka, sida ay soo jeedisay daawada Kuuriya, weli waxay noqon kartaa isku dar ah cawska aaska rootka leh saliidda sisinta. Wixii daaweyn ah cagaarsho, karkariyo 2-3 qaado oo ah miro caadka ah ee galaas biyo ah, kadib, laba saacadood oo galiyey iyo dhufan, cabo galaaska oo dhan maalintii oo dhan, u qaybinta 4 qaybood oo siman.
Waa muhiim! Decoction waxay sidoo kale ku habboon tahay laabotooyinka.
Iyada oo laabmaatada
Marka la isticmaalo faleebo madow oo ah timo madow oo leh cagaarsho, waxaa lagama maarmaan ah in si adag loo adkeeyo qiyaasta daawada loo qoray (3-4 qaado oo maalin ah). Cabbitaanka bogsashada (hal galaas oo biyo ah karkaraya, hal qaaddo oo ubax ah) waa in lagu duuduubaa, ku adkee laba saacadood kadibna cadaadis.
Waa muhiim! Ha ka badin qiyaasta!
Iyada oo cudurrada caloosha ku jira
Berries currant Black, brewed biyo kulul, oo si dhaqso ah, ugu dhakhsaha badan, 24 saacadood ee ugu horeeya, caawiyaan dib u soo celinta hawlaha caadiga ah ee caloosha iyo mindhicirrada buka, iyo ujeedooyin ka hortag ah, maraq waa in la sii wado subixii dhowr maalmood oo dheeraad ah. Gubashada hunguriga ayaa la daaweyn karaa, iyada oo la socdo kormeer caafimaad oo khasab ah, oo leh miro qunyar ah oo ka mid ah berry dhirta, qaadashada 5-6 miraha waqti.
Iyada oo nabaro nadiif ah
Calaamadaha xabadka iyo daahirsanaanta ayaa ah kuwo la aqbali karo in lagu daweeyo madadaalo madow, haddii aad dalbato isku-dar ah miraha la jajabiyey oo caano dhanaan ah. Waxa kale oo suurtogal ah in lagu maydho nabaro nadiif ah oo leh faleebo caleemo qallalan, siddeed qaado oo lagu ridayo weel leh toban koob oo biyo karkar ah 3-4 saacadood.
Sida loo iibsado oo loo kaydiyo alaabta ceeriin ah habeenkii
Tan iyo bishii Luuliyo, ururinta alaabta ceeriin ee ceeriin ah ayaa bilaabmaa, taas oo si hodan ah ula wadaagaan dadka by habeenkii madow. Dhammaystirka beergooyska leh caleenta ayaa la qorsheyn doonaa Sebtembar, oo midhaha ayaa sidoo kale carqaladeeya Bartamihii Oktoobar, marka caleemaha da'da ah ay mar hore ka lumeen guryaha faa'iido leh. Marnaba, sabab u ah bini'aadamnimada, berry oo qaangaar ah ma soo ururin. Nighthade ayaa la qalajiyey hooska hoostiisa hoostiisa oo la dhigo warqad khafiif ah oo lagu dhajiyo warqad khafiif ah waxaa lagu kaydin karaa meel gudcur ah iyada oo aan luminaynin tayada bogsashada ee 8da sano oo dhan.
Contraindications iyo saameynta daawooyinka timaha madow
Inkasta oo ay ugu xooggan tahay walxaha sunta ah ee ka kooban qaybta habeenkii - hilibka lo'da ee la goosto - waxay u muuqdaan kuwo baaba'aya berry buuxa, sidoo kale waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo miraha bisil iyo caleenta ka dib markaa iyada oo taxaddar leh marka la raadinayo caafimaadka. Tani waxay si gaar ah u tahay haweenka xilliga uurka iyo nuujinta, iyo sidoo kale carruurta. Waxaa jira kiisas badan marka daroogooyinka ku saleysan habka madow ee madow ay leeyihiin shakhsiyaad khilaafsan. Hase yeeshe, matag, shuban, daciifnimo, isku-duwid la'aanta dhaqdhaqaaqyada, iyo neefta oo adkaata waxay noqotaa astaamo lagu sumoobo timo madow, ka dibna booqasho degdeg ah ee dhakhtar waa in la raaco, oo walxaha jirka ka yimaada si dhakhso ah ayaa loo baabi'in doonaa sababtoo ah qadarka biyaha ama caanaha la cunay. Kaarbuurta firfircoon, taakulada, iyo caloosha jilcisan ayaa faa'iido u leh inay xasiliyaan xaaladda nubboonta sumaysan.
Sidaad ogtahay, sunta qiyaasaha yar yar waa la daaweyn karaa, dawo badan oo la isticmaalo waxay noqon kartaa sun. Isticmaalka habeenkii madadaalo, daryeel iyo taxadar ayaa loo baahan yahay.